: at 7/11/2009 12:20:00 AM
တနေ့ တနေ့ကွန်ပူတာကြီးရှေ့ မှာထိုင်ပြီး ဘလောဂင်း နေကြ ၊ ချက်တင်း နေကြတဲ့ကိုကို မမ မောင်လေး ညီမလေး တို့။ ရုံး အလုပ် လုပ်ရင်းတန်းလန်း နဲ့ သူဌေး အလစ်မှာ ဘလောဂ် ရွာလည် ကြသူများ အားလုံး တို့ကျန်းမာရေး နဲ့ညီညွတ်စွာ ဆက်လက် လှုပ်ရှား နိုင်စေဖို့ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ..
ကွန် ရှေ့ မှာ အချိန်တွေ အကြာကြီးထိုင်ပြီး ချက် ..အဲ .. အလုပ် လုပ် ရင် ထိုင်တာ ၊ ကွန်ပူတာ ကြီးနဲ့ လက်အနေအထား မှန်အောင်ထားတာ ။ တွေဟာ အရေးကြီးတဲ့အရာ တွေပါနော် ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဇက်ကျောတက် ။ လက်ကောက်ဝတ်နာ ။ ပခုံးနာ ။ ကျောနာ ။ ခါးနာ ။ တကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲ ။မျက်စိတွေ ပြာ ပြီး ကိုက်တာ ။ စသဖြင့် ခံစားရတတ်တယ် ။( ခုတောင် နာနေ ၊ ကိုက်နေ ၊ ပြာနေ ပြီ မဟုတ်လား ...)
ဒီတော့ ဒီကွန် ကြီးရှေ့ မှာ သက်တောင့် သက်သာ ထိုင်ဖို့နည်းလမ်းလေးများ ပြောပြပေးမယ် ။ မသိသေးတဲ့သူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ သိပြီးသား သူများ ဆက်မဖတ် ချင်ရင် ကျော်ခွ သွား ကြပါရန် ။
ဒီလို ကျောမှီပါတဲ့ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ကျော နဲ့ တင်ပါး ကို ၁၀၀ မှ ၁၁၀ ဒီဂရီ ထောင့်ကျ အောင် နောက်မှီ ထိုင်ပါ ။ ပုခုံး နှစ်ဖက်ကို အတတ်နိူင်ဆုံး လျှော့ထားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို လက်တန်းပေါ်မှာ အလိုက်သင့် တင်ပါ ။ ခါးအောက် နောက်ဖက် မှာ ခေါင်းအုံး သေးသေးလေး ခုထားပေးရင် ပို အဆင်ပြေ တာပေါ့ ။
ဒီလို လူနဲ့ ကြွက်နဲ့ ၊ကွန်ပူတာကြီးနဲ့သုံးနေကျ ပစ္စည်း နဲ့ အဝေးကြီး မထိုင်ရဘူးနော် ။ လက်ကားယားကြီးနဲ့ကြာရင် ညောင်းမှာပေါ့။
ဒီလို လေး လူနဲ့ စားပွဲနဲ့ နီးအောင်ထိုင် ။ ပြီးတော့ ကွန်ပူတာ ကြီးက လူ ရဲ့ အလယ် ရှေ့ တည့် တည့် မှာ ရှိ နေရမယ် ။
ဒါကတော့ ကီးဘုတ် ပေါ်မှာ လက်တင် ရမဲ့ အနေအထား ။ သူလည်းတူတူပဲ။ အလယ်မှာနေရမယ် ။
ကီးဘုတ် နဲ့လက်ကောက်ဝတ်တို့နေသင့် တဲ့အနေအထား လေးပါ ။ လက်ညောင်းသက်သာအောင် လက်ကောက်ဝတ်အောက်မှာ wrist pad အတုံး ပျော့ လေးတွေ ခံ ပြီးသုံးရင် ပို ကောင်း တာပေါ့ ။
တံတောင်ဆစ်ရယ် ၊ လက်ကောက်ဝတ်ရယ် နေရမဲ့ ပုံစံ ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ နဲ့ဒီလို ၁၀၀ ဒီဂရီ ထောင့် လောက်ဆိုရင် ထိုင်ရတာ လည်းသက်သာတယ် ။
ပြီးတော့ မျက်စိရဲ့ အနိမ့်အမြင့် က ကွန်ပူတာ စကရင် ရဲ့အပေါ်ဆုံး နဲ့ ရေမျက်နှာပြင် တတန်းတည်း ရှိသင့် ပါတယ်။
မျက်မှန် သမား ဆိုရင်တော့မျက်စိ က နဲ နဲ ပို မြင့် ( ဆိုလိုတာ က စကရင် ကို အောက်ဖက် နဲနဲ နှိမ့် ) ထားပေးသင့်တယ်တဲ့ ။ ဒါ မှ မျက်စိ က သိပ်ပြီး အားမစိုက် ရအောင် ပါ တဲ့
ဒီလို ခေါင်း လေးပါ နောက်မှီ လို့ ရတဲ့ ခုံ ဆို ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ။
ခြေထောက်ကိုပါ တင်ထား ( ဟိဟိ ခြေတော် တင်ခြင်း တမျိုး ပေါ့ )။
ဘလောဂင်း ၊ ချက်တင် လုပ်တာ ဇိမ် ပါဘဲ ။
ရေးမဲ့မှတ်မဲ့စာရွက်စာတမ်း တွေလည်း ဒီလို ရှေ့အလည် မှာထား သင့် တယ် ။
ဘေးမှာထားရင် လှမ်းကြည့် တာ ကြာရင် ကြက်ကြီး လည်လိမ် ဖြစ်မစိုး လို့ ပါ။
နောက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ ကတော့ ကွန် ပူတာကြီး ကို အကြာကြီးဆက်တိုက် မကြည့်သင့်ပါဘူး ။ အလွန်ဆုံး ၂၀ - ၃၀ မိနစ်လောက် ကြည့် ပြီးတိုင်း မျက်စိကို အနားပေးသင့် ပါတယ် ။ ဘယ်လို နားရမလည်း သိလား ။
မျက်စိကို အဝေးတနေရာ ပြောင်းကြည့် ပါ ။ ၅ -၁၀ မိနစ်လောက်ပေါ့ ။ ရုံးခန်းထဲ မှာဆို ပို အဆင်ပြေ ပါတယ် ။ ကိုယ် ကြည့် ချင်တဲ့ချောချော လှလှလေးတွေ ကို လှမ်း လှမ်းကြည့် ပေါ့ ။ ခေါ်တော ကြည့် နဲ့ ကြည့် မိရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့် ရှင်းကြ နော်။
လှတ ပတ ကြည့် စရာ မရှိတဲ့ကံဆိုးသူ များကတော့ မျက်စိသာ မှိတ်ပြီး အနားယူ လိုက်ပါ ။ ဟိဟိ
ဘလောဂါ ဦးဦး ကိုကို မောင်ငယ်များ ။ အိမ်ထောင်မကျ သေးသူ အမျိုးသားများ အားလုံး သေချာမှတ်ရန်။
လက်တော့ လေးနဲ့ဘလောဂင်း ချက်တင် လုပ်ရင် သတိထား နော် ။
လက်တော့ လေးကို အလွယ်တကူဆိုပြီး ပေါင်ပေါ် အကြာကြီး တင်မိရင်တော့ လူလုံးမလှ မဲ့ ဒုက္ခ နဲ့ လှလှ တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
ဘာလို့ ဆိုတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ လက်တော့ မှ ထွက်တဲ့ အပူချိန်ကြောင့် ကပ္ပါယ် အိပ် ကို ပါ အပူ ချိန်တက်စေပါသတဲ့။
ဘယ်ဖက်ကကပ္ပါယ်အိပ်မှာ အပူချိန်၂.၆ နဲ့ ညာဖက် မှာ က ၂.၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် လောက် တက်သွားတယ် ဆိုပဲလေ ။
အဲဒီတော့ ကပ္ပါယ်အိပ်ထဲမှ ဝှေးစိ ရဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲ မှုက ၁ မှ ၂.၉ ဒီဂရီ လောက်ရှိရင် သူ့ ရဲ့ မျိုးစေ့ သုတ်ပိုး ဖြစ်ပေါ်မှု ကို ထိခိုက်စေပြီး အမြုံ ဘဝ(သားသမီးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေ) ရောက်နိုင်ကြောင်းပါ ။
အထင် အမြင်တော် လွဲ မစိုး၍ ၊ ဒါမှ မဟုတ် ဒီထက် ပို ပြီး လေ့လာ လိုသူများ ဒီနေရာလေး ကို ဆက်ဖတ်ကြ ပါရန်
(The findings are reported in Europe's leading reproductive medicine journal Human Reproduction. They show that using an NC on the lap increased the left scrotal temperature byamedian 2.6°C and the right byamedian 2.8°C. Several previous studies have shown that increases in testicular or scrotal temperatures of between 1°C and 2.9°C are associated withasustained and considerable negative effect on spermatogenesis and fertility.)
ဒီအောက်မှာတော့ ကွန်ပူတာကြီးရှေ့ အကြာကြီး ထိုင်နေရသူများ အညောင်းအညာပြေ လေ့ကျင့် ခန်းလေးကို ထိုင်ရာမထ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေးပါ ။
စမ်းသပ်လုပ်ကြည့် ကြတာပေါ့နော် ။ ဘယ်လောက်မှ အချိန် မကုန် ပါဘူး ။ အကျိုးလည်း ရှိ ပါလိမ့်မယ် ။
ွှွှဲအပေါ်က ပုံလေးတွေနဲ့အကြောင်း အရာ များကို ဒီနေရာမှ ရယူ ပါတယ်။
အဲ .. ဒီ စာလေး ထိုင်ရေး နေရ တာ ကို က အတော်လေး ညောင်းသွား ပါပြီ ။
မိတ်ဆွေ တို့ အတွက် အကျိုး တစုံ တရာ ပေးနိုင် ခဲ့ မယ် ဆိုရင်တော့ ညောင်းရကျိုး နပ် ပါ ပြီ ။
အားလုံးသော မောင်နှမ မိတ်ဆွေများ မနာ မကျင် ပျော်ရွှင်စွာ နဲ့ဘလောဂင် ချက်တင် နိုင်ကြ ပါစေ ။ :)
နောက် အချိန် ရတဲ့ အခါ ..နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါလေး တခု အကြောင်း ဖေါ် ပြပေးပါမယ်။
မျှော်ရန် ... :) :(
:kiki : at 7/11/2009 12:20:00 AM
Acacia said... | Saturday, July 11, 2009 12:39:00 AM
အော် ဂလိုလား ဂလိုလား အော်
သားကြီး said... | Saturday, July 11, 2009 1:03:00 AM
တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင်သွားပြီ ဘဝပျက်ပြီ :P
ပေါင်ပေါ်မတင်တာက cool padပါတွဲပြီးလေးနေလို့
ဝက်ဝံလေး said... | Saturday, July 11, 2009 1:05:00 AM
ဟဟဟ ကိုသားကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပီ ခိခိ
မျှဝေပေးတာ ရှဲရှဲ ဖွားကိရေ များ နံပါတ် ၃ ရတယ်နော် ဒီတခါ ဘိတ်ဟုတ်တော့ဘူး ရယ် ဟဟဟ
HRmyanmar said... | Saturday, July 11, 2009 1:09:00 AM
ကျေးဇူးပါဗျာ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကအိပ်ယာထဲမှာ လှဲပြီး ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့ပေါ့ ကွန်ပြူတာ ကြည့်တယ် စာရိုက်တယ်ဆိုတော့ မကောင်းဘူးမှတ်လားဗျာ ခုပြောသလိုပြောင်းလုပ်သင့်လား ဖြေကြားပေးပါ :)
thawzin said... | Saturday, July 11, 2009 1:11:00 AM
ကျေးဇူးကို အထူး အထူး တင်မိပါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့လို လက်ပ်တော့ (ဟိ့ တတ်လွယ်သော) ကိုင်သူအတွက် အထူးသတိပြုသင့်စရာဖြစ်ပါကြောင့်
အဲဒီအချက်သည် ယောက်ျားလေး ကျွန်တော်တို့လိုသာ ဖြစ်တတ်ဖြစ်သည့်အတွက် သေချာ ဖတ်မှတ်သွားပါကြောင်းပါဗျာ
ကိုလူထွေး said... | Saturday, July 11, 2009 2:47:00 AM
ကိုယ့်ကို သူများက အရူးလို့ ပြောမယ်ထင်သေးတာ...
သူများမေးရင် အီဒီရော့က ပြောပြတာလို့ ပြောလိုက်မှာပေါ့...
suburbanian said... | Saturday, July 11, 2009 2:57:00 AM
သူကလဲ အပူချိန်တတ်တာ ခွဲဂျမ်းခွဲဂျမ်းနဲ့....
မငုံ said... | Saturday, July 11, 2009 3:38:00 AM
:( တခါမှ အဲဒီလို မထိုင်ဖူးဘူး။ ကြောက်တယ် ကောင်းကောင်း ချက်တင်ထိုင် အဲ အလုပ်လုပ်တော့မယ်နော်။ ကျေးဇူး ဘွားကိ
ရေတမာ said... | Saturday, July 11, 2009 10:31:00 AM
အီး မကြီးကိ ကယ်ပါ။ ကယ်ပါ။
အနော် ညဖက်ဆို လက်တော့က ပေါင်ပေါ်မှာဗျ။
နောက်ဆို ကူးပက် ခံတော့မယ်။
ဝေါ မီ ထော ဖော
မေဇင် said... | Saturday, July 11, 2009 10:31:00 AM
မမ ရေ မှတ်သားစရာပါပဲနော်...နောင့် တို့အတွက် ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်..မမ..း) နောင့်က နံရံကို မှီ လက်တော့ပ် ကို ပေါင်ပေါ တင် အဲ့လို.. စာရေး၊ စာဖတ်တာများတယ်..အိမ်မှာဆိုရင်ပေါ့...း)...ကျေးဇူးနော် မမ...။
yehtutnaung said... | Saturday, July 11, 2009 11:13:00 AM
ဂျပန်ကောင်လေး said... | Saturday, July 11, 2009 12:18:00 PM
မကိရေ.. ကျေးဇူးဗျာ..လေ့ကျင့်ခန်းတော့ စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်...
ahphyulay said... | Saturday, July 11, 2009 3:49:00 PM
မှာကွန်ပြုတာထားရိုက်တော့အမှားတွေ ပြင်ရတာ
များလွန်းတော့ဆယ့် နှစ်နာရီခွဲလို့အိပ်တော့ 
မယ်လဲဆိုရော ခါးကမတ်မရတော့ ဘူး၊ကုန်းထား
တာများသွားလို့ လေ။ လယ်ဗယ် ညှိဘို့ ကြိုးစား
ရတော့ မယ်။ရှက်..ရှက်...ပါ မကီရေ..။
မယ့်ကိုး said... | Saturday, July 11, 2009 3:50:00 PM
ညီမလဲ ညီမလေးမေဇင်လိုပဲ အခုတောင် ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ကြည့်နေတာ :P
Anonymous said... | Saturday, July 11, 2009 10:19:00 PM
နောက်ဆိုသိပြီ... အင်တာနက်ပေါ်မှာ အမြဲတွေ့နေရတဲ့သူတွေ.. ခါးနဲ့ပတ်သတ်တာတခုခုတော့ ရှိနိုင်တာပေါ့နော်..ဟီးဟီး..
ဥပမာ ခါးကိုင်းတာ လက်ပြင်ကုန်းတာ ခါးကြီး ခိုင်နေတာ... ဇက်ကျောတတ်နေတာ... မျက်စေ့မွဲနေတာ...မလွတ်တော့ဘူး...ဟားဟား...
မီးမီးချစ် said... | Sunday, July 12, 2009 12:48:00 AM
ရုံးမှာလဲ ထိုင်ရင်းထိုင်ရင်း နဲ့လျောလျော သွားတာ ၁၆၀ ဒီဂရီ လောက်ထိ ရှိတယ်.. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး ကအရမ်းအသုံးဝင်တာပဲ.. ကြည့်နေရင်းနဲ့တောင် လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်..ရှဲ့ ရှဲ့း))
မီးမီးချစ် said... | Sunday, July 12, 2009 12:49:00 AM
မီးချစ် ကတော့ မိန်းကလေး ဆိုတော့
ဘာမှ ကြောက်စရာ မလိုဘူးပေါ့နော် ဖွားဖွား အဲမှားလို့ကိကိ
ဂျစ် said... | Sunday, July 12, 2009 12:57:00 AM
ဂျစ်တို့လို့ ကွန်ပြူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအဘို့
တော်တော် အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ...။
ခြေလှမ်းသစ် said... | Sunday, July 12, 2009 9:42:00 AM
ဒေါ်ကီကီရေ လေ့လာသွားပါတယ် ဒီလိုကျန်မာရေးကို လိုက်စားပီ ဘလေဂ့်ဂင်းနိုင်ဖို့ အသိပေးတာလဲ ကျေးဇူး ပါ နော် .... ဒီလို ပညာများ ဆက်ပေးနိုင်ပါစေ..
မိုးခါး said... | Monday, July 13, 2009 11:52:00 AM
ခေါင်းမှီလေးပါတဲ့ခုံနဲ့သာဆို အလုပ်တောင် လုပ်နိုင်တော့မယ်မထင်ဘူး
တခါတည်း အိပ်ပျော်သွားမှာ မြင်ယောင်တယ် :D
စိတ်စမ်းရေ said... | Monday, July 13, 2009 6:18:00 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ရှေ့ဆက် ဘလောဂ်ဂင်းလို့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့.....။
Anonymous said... | Sunday, January 03, 2010 3:31:00 AM